Saxaafadda, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Ciise wuxuu yimid Yeruusaalem markii ugu horraysay intaanu silcin, meeshaas oo ay kuwa leh laamo timireed ay u diyaariyeen gelitaan ballaadhan. Wuxuu diyaar u ahaa inuu naftiisa u huray dembiyadeenna. Aynu eegno runtaan la yaabka leh ee xitaa si xoog leh u rogmanaya annagoo u jeesanay warqaddii uu u diray Ebrabiyaanka, kaasoo muujinaya in wadaadka sare ee Ciise uu ka sarreeyo wadaadnimada Haaruun.
1. allabarigii Ciise wuxuu qaadayaa dembiga
Innagu binu-aadmiga dembi baynu nahay dembiyadeenna, oo camalkeennuna way caddaynayaan. Xalku muxuu yahay? Dhibbanayaashii axdiga hore waxay u adeegi jireen inay daaha ka qaadaan dembiga oo ay tilmaamaan xalka keliya, allabari kaamil ah iyo kan ugu dambeeya ee Ciise. Ciise waa dhibbanaha ugu wanaagsan saddex siyaabood:
Injiil - Martiqaadkaaga Boqortooyada Ilaah
Qof kastaa wuxuu leeyahay fikrad sax ah iyo khalad, qof walbana wuxuu horay u sameeyay wax qaldan xitaa marka loo eego fikradiisa. Hadal caan ah ayaa yidhi: Qof walba waligiis wuu ka niyad jabay saaxiib, wuxuu jebiyey ballan, wuxuu dhaawacay dareenka qof kale. Qof walba wuu ogyahay dambiga.
Sidaa darteed dadku ma rabaan inay wax ku yeeshaan Ilaah. Iyagu ma doonayaan maalinta xukunka maxaa yeelay waxay ogyihiin inaanay hor istaagi karin Ilaah isagoo leh qalbi saafi ah. Waxay yaqaaniin inay isaga addeecaan, laakiin waxay kaloo ogyihiin inayna addeecin. Waxaad dareemaysaa xishood oo waxaad dareemaysaa dambi. Sidee deyntooda dib loogu soo furan karaa? Sidee maskaxda loo nadiifiyaa? "Dambi dhaafku waa rabbaani," ayaa lagu soo gabagabeeyey ...
Axdigii Hore wuxuu inoo sheegayaa in annaga oo bini aadamka ah nalagu abuuray suuradda Ilaah. Waqti fog kamaan qaadanin intaan bani aadamku dembaabnay oo jannada layga saaray. Laakiin eraygii maxkamadda waxaa ku yimid erey ballanqaad. Ilaah wuxuu yidhi: "Oo colaad baan idin dhex dhigi doonaa adiga (Shayddaanka) iyo haweeneyda iyo farcankaaga iyo farcankeeda; Isaga (Ciise) ayaa madaxa burburin doona adiguna cagtiisaad ku dhejin doontaa isaga (Ciise). Xoreeye farcanka Eva wuxuu u imaan lahaa inuu dadka badbaadiyo.
Eva waxay u badan tahay inay rajeysey in cunuggeeda koowaad uu noqdo xalka. Laakiin Qaabiil ayaa qayb ka ahaa dhibaatada. Dembigu wuu fidayaa wuuna sii xumaaday. Qayb ayaa jirtay ...